I-Apple isungula i-iOS 15.1 iBeta 2 kunye nezinye ii-Betas | IPhone iindaba
ULuis Padilla | 28/09/2021 20:43 | iOS 15, Izaziso
I-Apple isandula ukukhupha ibhetri yayo entsha ye-Betas ye-iPhone, i-iPad, iApple TV kunye neApple Watch. IOS 15.1 iBeta 2 ngoku iyafumaneka kubaphuhlisi kunye ne-iPadOS 15.1 Beta 2, tvOS 15.1 Beta 2 kunye neewatchOS 8.1 Beta 2.
Ngokufika nje kwe-iPhone 13 kunye nokumiliselwa kwe-iOS 15, iApple iyaqhubeka nokusebenza kuhlaziyo lwayo olukhulu kuzo zonke izixhobo zayo, kwaye ikhuphe iBeta yesibini yazo zonke. IOS 15.1 sele ineBeta yesibini, okwangoku ifumaneka kuphela kubaphuhlisi kodwa kungekudala nakubasebenzisi ababhaliswe kwiBeta yoLuntu. Phakathi kwezinye izinto ezintsha, olu hlaziyo lulandelayo lubandakanya iSharePlay, into ekuvumela ukuba "wabelane" ngothotho okanye imovie nabanye abantu abasebenzisa iFaceTime.. Izisa nethuba lokugcina isatifikethi se-COVID kwiWallet, nangona okwangoku kuphela eUnited States (eSpain ungayikhuphela esi sifundo esipapashe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo).
Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo olona phuculo lulindelweyo lulolo isisombululo sokungaphumeleli esibangele ukuba i-iPhone ayinakuvulwa kusetyenziswa i-ID yobuso ngesigqumathelo ngelixa unxibe i-Apple Watch. Eli nqaku litsha lifike kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukusombulula le ngxaki ikhathazayo, kwaye ngoku sele siyiqhelile yingxaki yokwenyani yokuba i-iPhone 13 ayisebenzanga nale nkqubo intofontofo. Nge-iOS 15.1 Beta 2 le sele isonjululwe. Ngaba kuya kufuneka silinde i-iOS 15.1 ukuba ikhutshwe okanye ngaba iApple iya kukhupha uhlaziyo oluncinci ngokukhawuleza ukulungisa oku? Kuya kufuneka silinde.
Ukongeza kwi-iOS 15.1 iBeta 2 kunye ne-iPadOS 15.1 Beta 2, iApple ikhuphe i-tvOS 15.1 Beta 2, ethi yenza umsebenzi we-SharePlay, Njengakwi-iPhone kunye ne-iPad. Ngalo msebenzi, abasebenzisi banokwenza iifowuni zeFaceTime ngelixa bebukele imovie, uthotho okanye ukumamela umculo. I-Beta yamva nje ekhutshwe namhlanje ye-Apple Watch, kunye ne-watchOS 8.1 Beta 2. Okwangoku asazi ukuba zeziphi izinto ezintsha ezibandakanya le Beta yesibini, kodwa siza kukwazisa kwangoko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » I-Apple isungula i-iOS 15.1 iBeta 2 kunye nezinye iiBetas zazo zonke izixhobo zayo
IFixit yahlula i-iPhone 13 Pro ngokumangalisa